Tsy Mbola Vitan’ireo Afrikàna Shiliana Ny Tolony Hanana Solontena Amin’ny Fanisam-bahoaka Nasionaly Manaraka · Global Voices teny Malagasy
MpanoratraShirley Campbell Barr
Voadika ny 26 Avrily 2016 3:05 GMT
Ilay hetsika ho an'ny fampidirana ny Afrikana-Shliana amin'ny antontanisa, nokarakarain'ny Fikambanana Tsy Miankina amin'ny Fanjakana Lumbanga, tohanan'ny Fondation Ford. Sary: Ong Lumbanga / YouTube.
Raha eo an-dàlana ny fikarakarana ny fanisam-bahoaka 2017 atao any Shily, manokatra andalana vaovao amin'ny tolony mba ho hita ny vondrom-piarahamonina Afrikana Shliana. Amin'ny Ivontoerana Nasionaly ho an'ny Antontanisa (INE) ny tolon'ilay vondrom-piarahamonina ankehitriny, ny INE izay namaly tsy nanaiky ny fangatahan'ny vondrom-piarahamonina Afrikana-Shliana mba hampidirana ny sokajy “avy any Afrika/mainty” ho ao anatin'ny fanontaniany amin'ireo teratany sy olon'ny foko.
Ny fanisambahoakan'i Shily dia misy ireo sokajy izay ahafantarana ireo vondrom-piarahamonina maro samihafa teratany sy ara-poko eken'ny lalàna Shliana, fa tsy tafiditra amin'izany ny vahoaka avy any Afrika. Araka ny fanadihadian'ny INE, anefa, maherin'ny 8.500 ireo Afrikana Shliana monina any Arica, tanànan'ny seranantsambo any amin'ny sisiny avaratr'i Shily. Maneho dingana voalohany ho an'ireo fikambanana mikatsaka ny mba hahitàna mivaingana ny Afrikana-Shliana ilay fanadihadiana, ary hametraka sava làlana amin'ny fanisàna ireo vahoaka avy any Afrika amin'ny any aoriana any. Rehefa feno tsara ny fanadihadiana, ny mba ho tafiditra ao anatin'ny fanisambahoaka ny taona 2017 no tanjon'ireo vondrom-piarahamonina, fa nolavin'ny INE anefa ilay sosokevitra.
Ho valinkafatra, nametraka “hetsika fiarovana ny loharano” tamin'ny INE ny “Fikambanan'ireo Avy any Afrika avy any amin'ny Faritanin'ny Razana Azapa”. Araka ireo solontenan'ny vondrom-piarahamonina Afrikana-Shiliana, milaza ilay hetsika fa “manitsakitsaka ny andalana faha 2 sy 14 amin'ny Toko Faha-19 ao amin'ny lalàmpanorenan'ny Repoblika ny fanapahankevitra tsy ara-drarin'ny hetsika nataon'ny INE […]. Milaza ny fitoviana eo anatrehan'ny Lalàna ireo ary ny zo ho afaka hivondrona hametraka fangatahana eo anatrehan'ireo manampahefàna.”
Nantenaina hanokatra làlana ho an'ireo politka mikendry ny fampihenana ny fahasamihafàna lehibe misy io fanisambahoaka io ary hitondra hetsika mahafaoka sehatra maro izay manohana ireo vahoaka anatin'ny fahantrana.
Araka an'i Rodrigo Ruíz avy amin'ilay vohikala media fanolo, El Desconcierto, tolona sarotra ny tolon'ireo Afrikana Shiliana amin'ny tsy fahitàna ny vondrom-piarahamonin'izy ireo ao anatin'ireo antontan'isa, ary noho izany ny any amin'ny politikam-bahoaka:
Tolona manohitra ny fanaovana azy ireo toa ny tsy misy mihitsy ny tolon'izy ireo, satria nolavina tsy hahazo ny tena zavatra fototra mihitsy izy ireo: ny fisiana ao anatin'ny fanisambahoaka. Araka ny nolazain'i Martin Hoppenhayn avy ao amin'ny ECLAC (Kaomisiona Ara-toekarena ho an'ny Amerika Latina sy Karaiba), “Misy zavatra misavorovoro saro-bahàna sy miverimberina amin'ny olan'ireo taranaka Afrikàna ao Shily, midika hoe satria tsy misy angon-drakitra anà fanadihadiana mikasika ny lafiny ara-tsosialy sy toekarena, noho izany tsy misy porofo arak'isa hatao fototra, araka izany raha tsy misy io porofo io, tsy hisy fahafantarana, ary ny vokany tsy misy maha-maika ary tsy misy fampidirana.
Tolona hatramin'ny ela
Ampahan'ny hetsika nataon'ireo vondrom-piarahamonina Afrikana- Latina Amerikana sy Karibeana, ireo ezaka hampitomboana ny fahitàna ny Afrikana-Shiliana. Ny Oktobra 2000, natao tany Santiago-n'i Shily ny “Seminera Rezionaly Manohitra ny Fanavakavahana”, ary nahitàna ireo manampahaizana momba an'i Amerika Latina sy Karaiba, nifantoka tamin'ireo fepetra ara-toekarena, sosialy, ary araka ny lalàna mba hiadiana amin'ny fanavakavahana (niampy fifantohana tamin'ireo vondrona marefo).
Roa volana taty aoriana, nifamory tao Santiago-n'i Shily ireo fikambanana sosialy, mba hankalaza niaraka tamin'ireo solontenam-panjakana, ny “Fivoriana Fanomanana ny Amerika Manohitra ny Fanavakavahana, Fanilikilihana araka ny Fiaviana, Tsy fitiavana ny tsy mitovy amin'ny tena ary Ireo Seho-nà tsy Fanekena rehetra.” Kanefa, efa am-polo taonany aty aoriana, araka ny afaka hita ao amin'ny bilaogin'ny Afrikana-Shiliana, mbola tsy mampiseho vokany azo tsapain-tànana ihany noho ireo “antony ara-teknika” ireo fifanarahana tamin'ny taona 2011:
Naharitra efa ho taona 2 ny fifanarahana niaraka tamin'ny governemanta ankehitriny, mba hampiditra ny fanontaniana iray ahafahana milaza hoe olona avy any Afrika eo amin'ny faritany Shiliana ianao. Maro ireo fivoriana niarahana tamin'ireo antokon-draharaha maro avy amin'ny ministera […] rehefa mipetraka mba hiresaka miaraka amin'ireo solontenan'ny INE ianao, hitanao fa tsy manana loharanombaovao betsaka mikasika io olana io izy ireo, ary mamaly tsy manome valiny mahafapo fotsiny amin'ny filazàna fa misy olana ara-teknika ny ampidirana ilay fanontaniana.
Taminà tafatafa niaraka tamin'ny Notivisión (jereo eo ambany), nohazavain'i Cristian Báez, avy amin'ny Fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana Lumbanga, ny fizotry ny fifanarahana tamin'ny INE ary ny maha zava-dehibe ny fisian'ireo taranaka avy any Afrika ao anatin'ny fanisambahoaka. Araka an'i Báez, tena ilaina tokoa ny fanisambahoaka “mba ahafahana mampiditra mivantana ny politikam-bahoaka” ary mba ahitàna tsara ny fisian'ireo sy ny filàn'ireo vondrom-piarahamonina Afrikana manerana ny firenena, tsy hoe ao Arica ihany, ilay faritra misy betsaka indrindra ireo vondrom-piarahamonina ireo. Niresaka ihany koa i Báez ny tsy fahitàna intsony ireo Shiliana taranaky ny avy any Afrika ao anatin'ireo taratasy ofisialy ary ao anatin'ny sarin'i Shily amin'ny maha firenena azy:
Misy idirany amin'ilay [fankalazana ny] fahazato taonan'ny Repoblika izany ampahan'ny famotsiana an'i Shily izany. Talohan'ny fitsingerenan'ny faha-100 taona, nolazaina hoe nodidian'ny filoha ny hanaovana feno ny fanadihadiana ny mombamomba ny tena: Iza isika Shiliana? 100 taona taorian'ny nahalasa mahaleotena tsy ho eo ambany fifehezan'ny Espaniola. Ary ao anatin'io mombamomba ny firenena io […] firenenan'ny fotsy io Shily io. Mieritreritra aho hoe tena nilaina io ampahany io tamin'ny famotsiana [ny firenentsika] ary famotsiana izay lasa mihoatra ny resaka fahitàna ny olona ety ivelany, famotsiana ara-kolotsaina ihany koa io.
Nanipika ny maha zava-dehibe ny fanekena ny isan'ireo taranaka avy any Afrika avy amin'ilay fifindramonina teo amin'ny samy Amerikana ihany koa i Báez :
Ankehitriny, tsy maintsy ekentsika fa misy [ihany koa] ny mpila ravinahitra vaovao amin'ny [Afrikana] hita […] avy tamin'ny fifindramonin'ny Afrikana. Afrikana-Kolombiana, Afrikana-Dominikana. Te-hampiseho isika hoe niova ity Shily ity. Ary fotoana ahafahana tsara [mampiseho izany] ny fanisambahoaka amin'ny taona 2017.
Efa hatramin'ny fotoanan'ny Famaboana tany ho eo an-tànan'ny Espaniola ny fisiana ara-tantaran'ireo taranaka avy any Afrika ao Shily, sahala amin'ny faritra hafa. Afaka hita ao amin'ny vohikala El Desconcierto amin'ilay lahatsoratra hoe “Afrochilenos, los invisibles de la nación” (Ny Afrikana-Shiliana, Ireo tsy Hita ao amin'ny Fanjakana) ny famintinana misy fanondroana, ireo fanadihadiana, ary tsikera.
Midika ho Fisiana ny hoe Voaisa
Valinkafatry ny tsy faneken'ny INE ny hetsika iray notarihan'ny Lumbanga sy ireo Fikambanan'ireo Taranaka Afrikàna Avy any amin'ny Tanindrazana Azapa. Ao amin'ny lahatsary YouTube zaraina amin'ireo tambajotra sosialy ilay hetsika:
Izahay ihany no hany olona avy amin'ny foko tsy eken'ny INE, izahay taranaka avy any Afrika […] Afrikana-Shiliana izahay, ary te-ho tafiditra anaty fanisàna.
Atao ao amin'ireo tambajotra sosialy ny ankamaroan'ilay hetsika, fa tsy ao fotsiny anefa. Tafiditra tamin'ireo sehatra nanaovana izany koa ireo toerana malaza, toy ireo kianjan'ny fanatanjahantena sy fanaovana hetsika koltoraly. Kanefa, tsy hoe nandeha nizotra nilamina foana akory ny hetsika. Ny volana Febroary, nisy vondronà mpankafy nesorina teny amin'ny kianja noho ny nanofahofàny sorabaventy mirefy roa metatra latsaka ny halavany, nisy izao hafatra izao “Fampidirana ireo Afrikana-Shiliana amin'ny Fanisambahoaka 2017.” Araka an'i Roberto Corvacho, iray amin'ireo olona nitondra ilay sorabaventy, “mba ho ekena ho toy ny vondrom-poko, sahala amin'ireo rahalahinay, ny Mapuche sy ny Aymara” no tanjona.
Eo amin'ny lahatsary eto ambany, misy ireo olon-tsotra mitantara ny fomba nanaovana azy ireo hatrany ho toy ny vahiny ary ny fanompàna azy ireo noho ny lokon'ny hoditr'izy ireo. Samy mitaky ny maha-taranaka avy any Afrika azy ny tsirairay, amin'ny filazàna fa tsy tokony ary tsy mampihena ny maha-an'ny firenena azy izany, izay tsy maintsy mitady làlana hankasitrahana ny fahasamihafàna.